SPARK5Pro ဆိုသည့်အတိုင်း ကင်မရာ (၅)လုံးနဲ့ ပွဲထွက်လာပြီး ဝယ်ယူသူတိုင်းကို နောက်ဆုံးပေါ် TWS Earbuds လက်ဆောင်ပေးမည့် TECNO Mobile | inmya.com
Home » News » SPARK5Pro ဆိုသည့်အတိုင်း ကင်မရာ (၅)လုံးနဲ့ ပွဲထွက်လာပြီး ဝယ်ယူသူတိုင်းကို နောက်ဆုံးပေါ် TWS Earbuds လက်ဆောင်ပေးမည့် TECNO Mobile
Submitted by Kyi Min Nyo on July 16, 2020 - 2:44pm
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီသော ဈေးနှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် Smartphone များကို ယူဆောင်လာနေကျ TECNO Mobile သည် SPARK5Pro ကို ထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကင်မရာ ၅လုံး၊ 5,000 mAh ဘက္ထရီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး 6.6 inch dot-in-display ကြောင့် ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည်လင်ကျယ်ပြန့်စွာ ခံစားနိုင်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android Q, TECNO ၏ HI OS 6.0, 128GB+4GB memory ဖြင့် အားဖြည့်ထားပြီး ၂၁၉,၉၀၀ ကျပ်ဖြင့် စတင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် SPARK5Pro ဝယ်ယူသူတိုင်းကို ၃၂,၉၀၀ကျပ် တန်ဖိုးရှိTECNO Hipods H2 များကို လက်ဆောင်ပေးပါတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ AI နည်းပညာ၊ 5,000 mAh ဘက္ထရီနှင့် 6.6-inch dot-in-display နဲ့ SPARK5Pro ကို TECNO Mobile မှ 12-April-2020 တွင်စတင် တင်သွင်းရောင်းချခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနောက်ဘက်တွင် 16 megapixel AI Quad camera ၄လုံး နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် 8 megapixel front camera ပါဝင်ပြီး အရည်အသွးက ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ နောက်ဘက် ကင်မရာ ၄လုံးက တော့ depth, primary camera, macro lens နှင့် AI lens ဆိုပြီး ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း တစ်မျိုးစီနဲ့ပါ။ TECNO ဟာ အမြဲတမ်း ခေတ်မီ AI နည်းပညာတွေကို ဈေးနှုန်းနည်းနည်းနှင့် လူတိုင်း အမြဲ ထိတွေ့နိုင်အောင် မိတ်ဆက်ပေးနေကျ အမှန်တံဆိပ်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး
Country Manager ဖြစ်သူ Jason Wong ကလည်း “ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသုံး Smartphone ဝယ်ယူလိုအားသည် မြင့်မားပြီး ကျွန်တော်တို့ကလည်း SPARK5Pro ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ဖြန့်ချီရတာ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ခေတ်မီ AI နည်းပညာတွေ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို အမြဲယူဆောင်လာတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုံးစံလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အခု SPARK5Pro ဆိုရင်လည်း သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချသော်လည်း အရည်အသွေးမြင့် ကင်မရာ ၅လုံးနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာ Social Media ပေါ် ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို တင်တာက အဓိကကျတယ်လေ။ SPARK5Pro ရဲ့ ကင်မရာတွေက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ Bokeh effect, AI HDR, macro mode နှင့် AI portrait mode တို့ကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်အပြည့် “ Immersive Screen” ကြောင့် true full screen viewing experience ကိုပါရရှိစေမှာပါ။
AI Camera 3.0 algorithm နှင့် AI Scene Detection ကြောင့် အသုံးပြုသူများသည် စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Flash ၆ ခုကြောင့် နေရာဒေသအချိန်ကာလမရွေး စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Flash ကတော့ အရှေ့ဘက်မှာ ၂လုံး အနောက်ဘက်မှာ ၄လုံးပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး Marco Mode ကြောင့်လည်း အနီးကပ် close – ups ရိုက်ချက်များပါ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ AI HDR နည်းပညာကလည်း Noise မပါဘဲ ပိုမို Sharp ဖြစ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်ကတော့ Seabed Blue နဲ့ Ice Jadeite ဆိုပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
• Camera: 8-megapixel front camera and 16-megapixel rear AI quad camera with4back flash and dual front flash.
• Software, Connectivity and Network: WIFI/BT 5.0 witha4G LTE enabled network anda2 Nano Sim slots.
• Android Q with octa-cores processor anda128GB+4GB memory. Customized HiOS ကြောင့် Rooting လုပ်စရာ မလိုအပ်ပါဘဲ user customization ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော သီးသန့် utility applications များကြောင့်လည်း memory free up လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Application များကို Freeze လုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိသည့် သီးသန့် feature များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
• Display: 6.6 inch dot in display screen ကြောင့် လှပသေသပ်သော ခံစားမှု ရရှိပါတယ်။ 90.2% perfect screen ratio ကြောင့် ပိုမို ကျယ်ပြန့်ပြီး လက်ထဲတွင် သက်တောင့်သက်တာရှိစေမှာပါ။ 720*1600 HD ကြောင့်လည်း Sharp display ခံစားချက်ကို ရရှိပါတယ်။
• Battery: 5,000 mAh ကြောင့်လည်း တစ်ခါအားသွင်းရုံနဲ့ တစ်နေ့တာ အားလုံလောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်
16 hours 50 min ago, by Kyi Min Nyo
1 week 15 hours ago, by by Kyi Min Nyo